၁၄ရက်တာ ငရဲခန်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ကိုဗစ် ကို အနိုင်ယူခြင်း – Shwe Thadin
03/07/2021 T Z Knowledge 0
ပထမဦးစွာ ကျမသည် ဆရာဝန်တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါ ကိုဗစ် လူနာများနှင့် ၁၄ရက်တာ အနီးကပ်နေထိုင်ပြုစုခဲ့ရခြင်း အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်
ကျမတို့ အိမ်ရဲ့ ခေါင်းရင်းအိမ်က ကျမ အဒေါ်တို့အိမ်ပါ ဆွေမျိုးသားချင်းများဖြစ်တာကြောင့် နှစ်အိမ့် တစ်အိမ် ကူးလူးဆက်ဆံနေကြပါတယ် ကျမ အဒေါ်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ စတင် ဖျားပါတယ် သူဖျားနေတာတော့ သိပေမယ့် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပါပဲ ဦးလေးက အသက် ၆၅နှစ်ပါ ဖျားနေတာ ဘယ်နှစ်ရက်မှန်းမသိပေမယ့် တစ်ရက်တော့ oxygen ရှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိတော့တာမို့ ဆေးရုံကို တင်ရပါတယ်
ဆေးရုံရောက်တော့မှ ကိုဗစ် positiveဖြစ်မှန်းသိတာပါ ဒါပေမယ့် နောက်ရက်မနက်မှာတော့ ကျမ အဒေါ် လဲ ဖျားနေပါပြီ သူ့ မြေးမလေးရယ် အပြင် ကျမတို့အိမ်က ကျမ အဖေ အမေနဲ့ အဒေါ်အပျိုကြီးတို့ပါ ဖျားသူက ဖျား လည်ချောင်းနာသူက နာ နှာစေးသူက စေးပေါ့
ဘယ်လို ကုသ ကြ မလဲ?
အိမ်ရှိလူကုန်နီးပါးဖြစ်တာဆိုတော့ ရောဂါ လက္ခဏာ ကတော့မျိုးစုံပါပဲ တချို့က အနံ့ ပျောက်ကြပေမယ့် ကျမ အဖေကကျတော့ အနံ့ လုံးဝမပျောက်ပါဘူး အဖေက ခြေထောက်တွေ ပေါင်တွေမှာ အနီစက်ကလေးတွေပေါ်လာပါတယ် ကျမ မိဘတွေ အဒေါ်တွေက ဆီးချိုရောဂါခံရှိသူတွေပါ
ဒီတော့ ဆေးတွေကို ဆင်ခြင်ပြီးသောက်သုံးရပါတယ် အဓိကတော့ အစားအစာပါ အစာကို မဖြစ်မနေစားရပါမယ် သူတို့ကို ကြက်ပေါင်းရည် ကြက်ဥ နဲ့ အသီးအနှံ အဓိက ထားကျွေးပါတယ်
အဖျားရှိတဲ့ရက်ဆိုရင်တော့ ထမင်းမကျွေးပါဘူး ကြက်ပေါင်းရည် ဆန်ပြုတ်လောက်ပဲ တိုက်ပါတယ် ဆီးချိုသမားများ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွဲကောသီး/ရေှာက်ပန်းသီး၊ စပျစ်သီး၊ပန်းသီးနဲ့ လိမ္မော်သီးလောက်ပဲ အဓိက ထားကျွေးပါတယ် ဆီးချို မရှိသူများကတော့ ဘာနေနေ အကုန်စားပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်
အစားအစာကို ပူပူ​​ နွေးနွေးစားပါ ရှူးရှဲရှဲ ဖြစ်မယ့်ဟာလေးတွေ စားပေးပါ ကြက်ဥ ပြုတ်ကို စားရတာ ငြီးငွေ့သွားရင် ကြက်သွန် အနီ အဖြူတို့နဲ့ သုတ်ပြီးစားပါ အနံ့ ပဲပျောက်ပျောက် အရသာပဲ ပျောက်ပျောက် အာဟာရရှိတာမှန်သမျှ စားသာစားပါ
1. Vitacee civit 500mgအား တနေ့ တစ်လုံး တစ်ကဒ်ကို ၂၅၀၀ ကျပ်(တနေ့ နှစ်လုံးထိ သောက်လို့ရပါတယ် vitamin C အရမ်းများရင်လဲ ကျောက်ကပ်ထိတယ်ဆိုလို့ တစ်ထောင်ထက်တော့ ပို မသောက်သင့်ဘူးလို့ တချို့က အကြံပြုပါတယ်)
2.အားဆေး ၁ လုံး (ဂျင်စင်းမပါရ) ကျမကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ညွှန်ကြားလို့ အင်မျူနော ဆိုတဲ့ အားဆေး တစ်လုံးကို ၆၇၀ ပေးရပါတယ် တနေ့ တစ်လုံးတိုက်ပါတယ်
3. Brand ငှက်သိုက် မနက်တစ်ဘူး ညတစ်ဘူး တိုက်ပါတယ် သူကတော့ ဘူးသေးတစ်ကဒ် ခြောက်လုံးပါတာ နှစ်သောင်းကျော်လောက်ရှိပါတယ် (ဆီးချိုသမားများဖြစ်တာကြောင်​့ sugar free ကိုသာတိုက်ပါတယ်)
4. အဖျားရှိရင်တော့ Para dank 500 အား တစ်လုံးထည့်တိုက်ပါတယ် (အကယ်၍ ချွေး အရမ်းထွက်လို့ အရမ်း weak ဖြစ်တဲ့သူတွေ အဖျား ၁၀၂ လောက်အထိ ဖြစ်သွားရင်တော့ ပါရာစီတမော ဆေးတောင့်Fast 500 ဆေးရည်ကို စအိုထဲ ထည့်ရပါတယ် ဆေးကို ရေခ​ဲသေတ္တာ ထဲတွင်ထားရန်)
5.အရမ်းချွေးထွက်များရင် ဓာတ်ဆားရည် သောက်လို့ရပါတယ် (တနေ့ တစ်ထုပ်လောက်ပဲတိုက်ပါတယ် နေ့တိုင်းတော့မတိုက်ပါဘူး လိုအပ်မှ တိုက်ပါတယ် ဆီးချို သမားများဖြစ်တာကြောင့် အလွန်အကျွံသောက်လျင် ကျောက်ကပ်ထိပါတယ်)
6. ချောင်းဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့ somulx (ရိုးရိုး ) တိုက်ပါတယ် မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ကိုလဲ ဒီနေရာမှာ ချန်ထားလို့မရပါဘူး ထက်လင်းရင်လူးဆေးလိမ်းပြီးတော့ ရဲယို ရွက်ကို မီးလေးအုံပြီး ရင် ဘက်မှာ ကပ်ပေးပါတယ်
သူလဲအတော်စွမ်းပါတယ် တနေ့ တစ်ခွက်လောက်တော့သောက်ပါ
8.ဆားရည် အိပ်ရာဝင် အိပ်ရာထတိုင်း လုပ်ကျင်းပေးပါ
9.oxygen တိုင်းတဲ့စက်လေးဝယ်ထားပြီး ခနခနတိုင်းကြည့်ပါ (အလင်း ရောင်ထဲ မှာ တိုင်းရင် မမှန်တက်ပါဘူး နံပါတ်ငြိမ်ပြီးစက္ကန့်၂၀ အထိ စောင့်ပေးပြီးမှ အဖြေကို အတည်ယူပါ ၉၄အထိ ကောင်းပါတယ်)
10.အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ ပင်ပင်ပန်းပန်း မလုပ်ပါနဲ့ အဝတ်လျှော်တာတောင်မလုပ်ပါနဲ့
ကျမတို့အိမ်မှာ ကျမ ညီမရယ် ကျမရယ် ၄၅ရက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးရယ် မကူးပါဘူး
ကျမကတော့ ရေတွေကိုင်တာ များလို့လား တော့ မသိ တစ်ရက်က တစ်ညလုံး နှာချေပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ဂျင်းပြုတ်ရည် ထကျိုပြီး သောက်လောက်ပါတယ် နှာချေတာက လွဲပြီး ဘာမှ မဖြစ်တော့ပါဘူး
ကျမ​တို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အိမ်မှာ စဖြစ်ကတည်းက vitacee 500 D3, K2 တို့ကို တနေ့တစ်လုံးပုံမှန်သောက်ပါတယ်
1. အိမ်မှာ ကိုဗစ် positive လူနာရှိကတည်းက. အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်လုံးဝမထွက်တော့ပါ ဒီနေ့ဆို ၁၄ရက်ပြည့်ပါပြီ(သူများကို မကူးဖို့က အဓိကပါ)
2.ပစ္စည်း တစ်ခုခုကိုင်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ
3 .mask နဲ့ face shield တပ်ပါ
4.vitamin C လောက်တော့ ကြိုသောက်ထားလို့ရပါတယ် (အလွန်အကျွံ မသောက်ရန်)
7.ရေနွေး​ ကြမ်း သောက်ပါ
8.ပိုးသတျဆေး တနေ့ နှဈကွိမျဖွနျးပါတယျ (detol ဆေးရညျ ရယျ ရရေယျ ဆပျပွာရညျ အနညျးငယျ ရောထညျ့ပွီးဖွနျးပါတယျ ဆေးဖွနျးတဲ့ ဘူးလှတျအသေးလေးတှဝေယျလို့ရပါတယျ အပငျဆေးဖွနျးဘူးပုံစံပါ တဈဘူး လေးထောငျကြောျလောကျပဲ ကပြါတယျ) အိပျရာ အိမျသာပါမကနြျဖွနျးပါတယျ
10. မိမိ၏ အဝတျအစားမြားကို သပျသပျ ကွှပျကွှပျအိတျနဲ့ ခှဲထားပါလြှောျတဲ့အခါမှာလဲ ရနှေေးနဲ့ ဆပျပွာမှုနျနဲ့ နာရီဝကျလောကျစိမျထားပွီးမှ လြှောျပါတယျ
Oxygen ၉၄ အောက်ကျနေလျင်အဖျားအရမ်းကြီးနေလျင်ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူပါ(အကယ်၍ oxygen ကျနေလို့ ချက်ချင်းဆေးရုံ သွားလို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလျင် ပက်လက်မအိပ်ပါနဲ့ ကျော်မှီလေးနဲ့ မတ်မတ်အနေထားပုံစံနဲ့ အိပ်ပါ)မျက်လုံးနှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ စားဖို့ပဲ အဓိကထားပါ
Airconပန်ကာလေ လုံးဝလုံးဝမခံပါနဲ့ (လုံးဝအရေးကြီးပါသည်)လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာမှာနေပါ မနက် နေရောင်ခြည် မိနစ် ၂၀လောက် နေရောင်ခံပါ
ဆေးများအလွန်အကျွံ မသောက်ပါနှင့် (စဖြစ်တဲ့ ကျမဦးလေးက ဆီးချိုရောဂါ လုံးဝမရှိပါဘူး
ဒါပေမယ့် အစားမစားချင်ဘူးဆိုတိုင်း ensureဖျော်ရည် တွေ အရမ်းသောက်တာကြောင့်လားတော့မသိ ဆေးရုံရောက်တော့ ဆီးချို ၃၀၀ အထိရောက်သွားပါတယ် ကိုဗစ်ဖြစ်နေတုန်းဆီးချိုဝင်တက်တယ်လို့လဲ ဆိုကျပါတယ် သိုသော်လဲ အစားမစားနိုင်သူများအဖို့ ensureက အကောင်းဆုံးပါ အရမ်းအလွန်အကျွံတော့ မသောက်သုံးသင့်ဘူးပေါ့)
ဆီချိုသမားများ ဆီးချိုလေးလဲ ပုံမှန်တိုင်းပေးဖို့လိုပါတယ် တခါတလေ ဆီချိုဆိုတိုင်း တက်တာမဟုတ်ပဲ အချိုဓာတ်လိုတာလဲ ဖြစ်တက်ပါတယ် (ဟိုက်ပါရတယ်လို့ ပြောပါတယ် ဆီးချိုတက်တာထက် ကျတာက ပိုဆိုးပါတယ်သကြားရည် သို့မဟုတ် အချိုရည် အနည်းငယ် သောက်ပေးရပါတယ်)
ဖျားပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူနဲ့မှ မထိစက်ရန် အပြင်လုံးဝမထွက်ပါနဲ့နော်
မိမိကိုယ်ကိုယ်သံသယ လုံးဝမဝင်ကျသူများအထူးဂရုစိုက်ကျပါ ဒီရာသီမှာ တုပ်ကွေးဆိုတာမရှိသလောက်ပါနော် နှာချေ ချောင်းဆိုး လည်ပင်းယားတာနဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ ရောဂါပိုးစဝင်နေပြီလို့သာ သတ်မှတ်ပြီးတော့ အစစအရာအရာ အထူးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ကြပါ
ဒီရောဂါဖြစ်လို့ ရပ်ကွက်နာပါတယ် လို့ ပြောသူများ ဆေးရုံကို အတင်းပို့ချင်နေသူများ ရေတစ်ဘူး ကြက်ဥတစ်လုံးတောင် မပေးဘဲ စဆရက လုပ်နေသူများကို လုံးဝလုံးဝ south ဂရုမစိုက်ရန်
ဆီကြော်များ မစားရန် Aircon ပန်ကာလေ မခံရန် အစာမစားဘဲ မနေရန် ဆေးအလွန်အကျွံ မသောက်ရန် အနံ့ မရဘူးဆိုပြီး နှာခေါင်းထဲဆေးရည်များထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရန် သူ့အလိုလို ပြန်ရပါလိမ့်မည်
ရေနွေးငွေ့များ အလွန်အကျွံမရှူရန်(ကျမအဖေဖြစ်သူက ရေနွေးငွေ့ ရှူရမယ်ဆိုလို့ မတရားရှူပစ်လိုက်တာ နောက်နေ့oxygenပါပိုကျသွားတယ် ပုံမှန်အသက်ရှူရုံလောက်လေးပဲရှူပါ)
အသကျ ၆၀ကြောျ ဆီးခြိုသမား ငါးယောကျနဲ့ အသကျ၅၀ ကြောျတဈယောကျ ပွနျလညျကနြျးမာလာအောငျ ကမြတို့ လူငယျမြား မကူးစကျအောငျ ဝိုငျဝနျး အကွံပေးခဲ့ကသြော ဆရာဝနျ အဈကို အဈမမြား ရကေအစ ကွကျဥအစ ကွကျပေါငျးရညျအဆုံး အိမျရှေ့အရောကျ လာရောကျပို့ပေးကသြော နေ့တိုငျးဆိုသလို စြေးဝယျပေးကသြူမြား နေ့တိုငျးဖုနျးဆကျပွီး အားပေးစကားပွောပေးကတြဲ့ ဆရာဆရာမ သူငယျခငြျးမိတျဆှမြေား
တမွို့ထဲ မနတောတောငျ စားစရာမြားပို့ပေးကသြူမြား ပို့ပေးမယျလို့ ဖုနျးဆကျလှမျးပွောကသြူမြားတမွို့ထဲနေပမေယျ့လဲ အရှေ့နဲ့အနောကျ တောငျနဲ့မွောကျ နတောတောငျ ကွကျ ပေါငျးရညျ ပို့ပေးခငြျကသြူမြား ပို့ပေးကသြူမြားလူကိုယျတိုငျမဟုတျပမေယျလဲ deliveryနဲ့ စားစရာနဲ့ဆေးတှေ ပို့ပေးကသြူမြား
အားလုံးကို ဦးခိုက်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါရစေ
မှတ်ချက် ။ oxygen အရမ်းကျပြီး အဖျားအရမ်းကြီးပါက ဆေးရုံသွားရန်
ဒီရောဂါသည် စိတ်နဲ့ အစားအစာက ၈၀ရာခိုင်နှုန်းလောက် အဓိက ကျပါတယ် ဂရုတစိုက်နေထိုင်ပါက အသက်မသေနိုင်သော ရောဂါဖြစ်သည် ရောဂါကူးမှာကို အရမ်းမကြောက်ပါနဲ့ မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ ကူးစက်လာရင်လဲ ငါ ဘယ်လို အနိုင်တိုက်မလဲ ဆိုတာကို အဓိက ထားပြီးတွေးပါ
မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုဗစ် လူနာများရှိလို့ရှိရင်လဲ ဘာလိုအပ်လဲ မေးမနေပါနဲ့ ရေသန့် တစ်ဘူး ပို့ပေးလဲ သူတို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ် ကြက်ဥတစ်လုံးကလဲ အားဖြစ်စေပါတယ်
သိချင်တာများရှိလို့ရှင်ရင်လဲ ကျမကို အချိန်မရွေး မေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
ကျမ ဆရာဝန်တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါ အကောင်းဆုံးအကြံတော့ ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
သားဖြစ်သူပိုင်တံခွန်မလွတ်သေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် ရှော့ရသွားပြီး ဆေးခန်းတွင်ဆေးသွင်းခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိခင်